us foreighn and defense minister condole on death of bipin - Hindusthan Samachar Nepali
09 Dec 2021 13:39:47
वाशिङ्गटन, 09 दिसम्बर (हि.स.)। अमेरिकाका विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कन र रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनले बुधबार विमान दुर्घटनामा भारतका चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावतको निधनमा शोक व्यक्त गरेका छन्। ब्लिङ्कनले ट्वीट गरे, ‘दुःखद दुर्घटनामा भारतीय चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल रावत, उनकी पत्नी र सहयोगीहरूको मृत्यमा मेरो गहिरो समवेदना छ। हामी जनरल रावतलाई एक असाधारण नेतृत्वकर्ताको रूपमा याद गर्नेछौं, जसले आफ्नो देशको सेवा गरे औं अमेरिका-भारत रक्षा सम्बन्धहरूमा योगदान दिए’।
अमेरिकाका रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनले ट्वीट गरे, ‘जनरल रावतले भारत-अमेरिका रक्षा डीलमा एक अमेट छाप छोड़ेका छन् र उनी भारतीय सशस्त्र सेनाहरूको एकीकृत युद्धक क्षमता भएको संगठनको रूपमा अघि आउने अहम भूमिकामा थिए’। यूएस इण्डिया स्ट्रेटेजिक एण्ड पार्टनरशिप फोरमको तर्फबाट भनियो, ‘फोरमले जनरल बिपिन सिंह रावत, उनकी प्तनी र अन्य 11 जनाको विमान दुर्घटनामा भएको मृत्युमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछ। उनीहरूका परिवारहरूको साथ हाम्रो समवेदना छ। यी देशभक्तहरू गुमाएकोमा हामी देशको साथ शोक मनाउँदछौं’।
भारतमा स्थित अमेरिकी दूतावासको तर्फबाट भनियो, ‘भारतका प्रथम चीफ अफ डिफेन्स स्टाफको रूपमा जनरल बिपिन रावतले भारतीय सेनामा परिवर्तनको एतिहासिक अवधिको नेतृत्व गरे। उनको विरासत जारी रहनेछ’। उल्लेख्य, बुधबार तमिलनाडूको कुन्नूर नजिक हेलीकप्टर दुर्घटनामा सीडीएस रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत र अन्य 11 जवानको मृत्यु भयो।
चीनको मद्दतले पाकिस्तानमा बन्नेछ अन्तरिक्ष केन्द्र
बीजिङ, 29 जनवरी (हि.स.)। आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छिमेकी पाकिस्तान लगभग प्रत्येक कुराको निम्ति च..
तुर्की र पाकिस्तानले मिलेर अरब सागरमा अन्तरिक्षतट बनाउने
इस्लामाबाद, 28 जनवरी (हि.स.)। तंगीको शिकार पाकिस्तान अब अन्तरिक्षसित जोड़िने तयारीमा छ। पाकिस्तानले ..
यूक्रेनलाई नाटोमा सामेल नगर्ने रूसी मागलाई अमेरिकाले खारेज गऱ्यो
वाशिङ्गटन, 28 जनवरी (हि.स.)। यूक्रेनलाई लिएर अमेरिका सहित नाटोका सदस्य देशहरू र रूसबीच विवाद रोकिने ..
पेरिस वार्तामा सहमतिः संघर्ष विराम जारी राख्नमा रूस-यूक्रेन राजी
पेरिस, 27 जनवरी (हि.स.)। रूस र यूक्रेनबीच युद्धको सम्भावनाहरूबीच दुवै देशको वार्ताको सकारात्मक परिणा..